20 Dec, 2019 - 00:12	 2019-12-19T13:05:25+00:00 2019-12-20T00:00:18+00:00 0 Views
NDIRI mukomana ane makore 36, handina chirwere uye ndinokutsvagawo tsvarakadenga musikana murefu akanaka pachiso nepachimiro asina chirwere ane makore 18 kusvika 36. Vandifarira ngavatumire masms pa0712 491 679, zvakawanda tozotaura.
Makadii veKwayedza? Ndotsvakawo musikana akanaka asina chirwere uye ane rudo. Ngaave ane makore 25 zvichidzika. Nhare yangu 0776 857 455.
Makadii veTishamwaridzane? Ndinotenda nechirongwa chenyu, ndakawana mukadzi wandaida saka vose vaifona pa0713 036 835 ngavachirega havo.
Ndodawo musikana akanaka wekuroora, ndiri mukomana ane makore 28. Andifarira ngaandibate pa0712 043 876.
Ndinotsvagawo mukadzi wekuroora, mutsvuku akanaka uye anoda imba. Ngaave nemakore 18 kusvika 25 ane mwana 1. Ini ndine makore 27 asi matsotsi kwete. Andifarira anondibata pa0788 950 288.
Makadii henyu? Ndodawo mukadzi akavimbika wokuroora ane makore 28 zvichidzika. Ngaave ari pamushonga, ndine makore 46. Nhare yangu 0771 849 893.
Makadii mhuri yeZimbabwe? Ndiri murume ane makore 32, ndinodawo mukadzi ane makore 24 kusvika 30 anoda kuroorwa. Nyora meseji kana kufona, matsotsi kwete. Ngaave ane mwana mumwechete kana asina. Andifarira anondibata pa0717 070 481.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mukomana ane makore 21 handina chirwere uye handisati ndamboita zvebonde. Ndotsvagawo musikana kana mukadzi ane mwana 1. Andifarira anondibata pa0713 560 515.
Ndiri kutsvagawo mudzimai wekuwana. Ndiri kwaMutare, zvizhinji totaura nemameseji pa0777 696 915.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 35, ndinodawo murume ave kuda zvemba ane vana vakewo. Ndine mwana 1, ngaave ari pamushonga uye asingataridzike. Ndinoda ane zvaanoita, andifarira ngaandibate pa0782 039 792.
Ini ndiri murume ane makore 39 nevana 3, ndiri HIV negative uye ndinotsvakawo mukadzi wekushamwaridzana naye ari pasi pemakore 35. Nhamba yangu 0779 338 125.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 45 ndotsvagawo murume ane makore 45 zvichikwira wekuwadzana naye. Andifarira ngaandibate pa0788 495 663.
Makadii veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 27 uye vana vaviri. Ndogara muHarare, ndinotsvagawo murume ari pachokwadi. Vanotamba kwete, nhare yangu 0782 868 699.
Makadii? Ndiri musikana ane makore 22 ndinotsvagawo mukomana ane makore 25 – 27 ari kuda zvemusha. Ndoda anoshanda, munondibata pa0714 712 735.
Makadini? Ndiri murume ane makore 35, ndoda mukadzi ave kuda zvemba ari siriyasi chete, ngaave nemakore 19 – 32. Musabhipa, zvakawanda tozotaura pa0713 410 921.
VeKwayedza sando dzenyu, shamwari yerudo ndakaiwana. – 0776 343 758.
Makadii? Ndinotsvaga mukadzi wekuroora ari pachokwadi anoda zvemba uye anoshanda. Ini handishande asi mari ndinotsvaga. Handirware, andifarira ngaandibate pa0715 031 449.
Ndiri murume ane makore 41, ndotsvagawo mukadzi asina murume. Nhamba dzangu 0784 199 660.
Makadii veKwayedza? Ndodawo murume ane makore 25 kusvika 36. Ini ndine 23 nemwana wangu 1 saka ndodawo ane wakewo 1 kana 2. Nhare yangu 0772 576 879.
Makadii henyu? Ndiri murume ane makore 35, ndinotsvagawo mukadzi ane makore 25 zvichidzika ane mwana mumwe. Nhare yangu 0772 208 068.
Ndiri murume ane makore 37, handirware uye ndine vana vatatu. Ndotsvagawo mukadzi anoda zvemba, ngaave ari HIV negative. Andida ngaandibate pa0717 692 211.
Makadii? Ndiri mudzimai ane makore 48, ndiri pamushonga uye ndotsvagawo murume akafanana neni ane makore 55 – 50. Ngaave achishanda muHurumende kwete vakomana vebasa uye achinamata kwete tsotsi. Andifarira nhare yangu 0787 030 249.
Ndiri mudzimai ane makore 32 nevana 2, ndiri pamushonga uye ndoda murume anoda zvemba. Ari pachokwadi ndibatei pa0783 789 536 chero nguva.
Makadini veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 50 ndakafirwa, ndinoshanda uye ndinotsvagawo murume akafirwawo ane makore 50 – 60 ari pamushonga. Ngaave akavimbika anoshanda, muKristu, ane rudo asingaputi kana kunwa doro achida kuroora. Nhamba yangu 0712 244 831, vanoda zvemafaro kwete.
Ini ndoitwawo Pardon, ndine makore 30 uye ndotsvakawo mukadzi akavimbika ane makore 20 – 25. Andifarira ngaandibate pa0788 934 905.
Makadii henyu? Ndiri murume ane makore 33 ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ari pachokwandi. Ndine vana 2 uye ndiri pamushonga. Anoda zvekuvaka musha ngaandibate pa0777 021 672.
Makadii? Ndiri murume ane makore 30, ndinotsvaka mukadzi wekuroora ane makore 18 kusvika 28. Runhare 0771 841 091.
Makadii paKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 46 ndotsvagawo murume ane rudo.
Ndiri HIV positive, vari negative musafone. Mwana ndine 1, vanoda munondibata pa0775 829 381.
Makadii veKwayedza? Ndotsvagawo shamwari yechisikana kana kuti penpal. Nhamba dzangu kune anoda i0715 193 600, lets be friends.
Ndinodawo mudzimai wekuroora ane makore 20 kusvika 35. Nhare yangu 0779 261 087.
Ndiri murume ari kutsvaka mukadzi ane makore 20 kusvika 36 anoda zvekuroorwa. Nhare yangu 0779 261 087.
Ndiri kutsvakawo mudzimai anoda kuroorwa chero nguva kubva iko zvino ari pasi pemakore 36. Nhare yangu 0779 261 087.
Makadini? Ndiri murume ane makore 47, ndinodawo mudzimai ane makore ari pasi pe35 ane mwana mumwechete kana asina. Zvizhinji totaura pa0713 889 710.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 26, ndodawo musikana ari pachokwadi wekuroora asina chirwere. Nhamba dzangu 0775 972 744.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 34 ndinotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 33 asina mwana uye anoshanda. Ngaave asiri pamushonga anonamata, matsotsi musatipedzere nguva. Nhamba dzangu 0716 983 016.
Makadiiko veKwayedza? Ndiri murume ane makore 40, HIV positive nevana 4. Ndinotsvaga mudzimai wekuroora ane makore 35 zvichidzika ari HIV positive seni.
Ngaave ane vana vakevo 3 zvichidzika. Andifarira anondibata pa0717 901 024 totaura manheru. Ndoda anonamata Jowani Masowe. Ndatenda.